Clement Lefebvre: Mir tsy misy ifandraisany amin'ny Linux Mint | Avy amin'ny Linux
Clement Lefebvre: Mir tsy misy ifandraisany amin'ny Linux Mint
Tsy misy dikany i Mir. Tsy nisy naheno an'io herinandro lasa izay ary tsy miova ny drafitra mifototra amin'ny vinavinan'olombelona. Raha tsy mazava amin'ny Ubuntu hoe inona no tadiavin'ny Ubuntu dia olana izany. Tsy misy ifandraisany amin'ny Linux Mint.
Ity no nolazain'i Clem rehefa nanontany azy i Swapnil Bhartiya tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'i Muktware momba ny fomba hitantanan'i Mint ny tetezamita avy any X mankany Mir amin'ny andiany Ubuntu ho avy. Nilaza ihany koa i Clem tamin'io tafatafa io fa izay tsy miraharaha an'i Mint dia tsy ny fizarana base na ny tontolon'ny birao, fa ny vokatra farany sy ny zavatra niainana nomena ny mpampiasa dia nolaviny fa misy ny drafitra handaozan'ny Mint ny base Ubuntu ary hanangana manontolo momba an'i Debian ary nolaviny ny fiasa amin'ny kinova takelaka Mint milaza fa ny fomba fanaony dia ny hahatonga ny Linux Mint 15 (izay hiorina amin'ny Ubuntu 13.04) ho tsara kokoa noho ny 14.
Ny resadresaka feno eto
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Clement Lefebvre: Mir tsy misy ifandraisany amin'ny Linux Mint
"Raha tsy mazava amin'ny Ubuntu hoe inona no tadiavin'ny Ubuntu dia olana izany. Tsy misy ifandraisany amin'ny Linux Mint.
Iray amin'ireo koa izany. Raha miorina amin'ny ataon'ny Ubuntu ny distro anao, ary mandà ny fandaozanao ity fototra ity ary tsy hiantehitra tanteraka amin'i Debian ianao, inona no hataonao rehefa mampiasa Mir ny Ubuntu? Fa ampondra inona….
Miombon-kevitra aminao aho, io zavatra io ihany no tonga tao an-tsaiko. Tsy milaza mazava aho raha hampiasa Mir na tsia, fa ny zavatra mahaliana dia ny mody milaza fa tsy miankina amin'ny Ubuntu i Mint. Ary fotoana fohy taorian'izay dia nifanohitra tamin'ny tenany izy tamin'ny firesahany ny zava-misy fa miankina amin'ny toerana anaovany azy io, ary tsy hanova ny distro fototra izy io satria "io no safidy tsara indrindra ho azy ireo" ary raha mbola tsy miova izany dia "tsy manana drafitra hanova zavatra isika"
Tsy ho gaga mihitsy aho raha mahita hevitra hafahafa izy ireo amin'ny famoronana ny mpizara sary azy ireo ihany koa.
Malcer dia hoy izy:
Eny, tena tsotra: fonosin'izy ireo X na Wayland (raha sanatria ka esorin'i Ubuntu amin'ny toerany ", sy voila. Ny sisa amin'ny birao dia hanana azy io ho fiankinan-doha, ka tsy hisy olana.
Ary na izany aza, scam sandoka i Mir. Hampiasain'izy ireo ny modely XMir, izay midika fa eny, ny Unity dia hamboarina manokana ho an'ny Mir ihany, fa ... ny mpamily sy ny rindranasa dia "hofehezina", izany hoe tsy maintsy mampiasa fifanarahana mihemotra i Mir mba hampiasa ny ambiny an'ny rindrambaiko. Midika izany fa botch izy io ary ho mavesatra sy mora hadisoana, zavatra izay tsy hananan'i X na i Wayland (izay tohanan'ny tetikasa sisa).
Valiny tamin'i Malcer
eltuga84 dia hoy izy:
Ary hanao ny zavatra nataony ihany izy ireo rehefa nifidy ny hampiasa ny firaisankina ho birao lehibe i Ubuntu: mandrosoa ary mamorona Kanelina. MIr dia fonosana (maromaro raha ny tena izy), mety ho bebe kokoa na tsy dia zava-dehibe izy io fa azo soloina foana ary io no tena hataon'ny mint, aza adino fa ny mint dia distro mahaleo tena miaraka amin'ireo mpamorona azy manokana, tsy kinova Ubuntu io ary mieritreritra aho fa efa naseho efa ela be ...
Valio amin'i eltuga84
Tsara ho an'i Lefevbree ..
Ny zava-misy fa mifototra amin'ny Ubuntu dia tsy midika hoe mandova ny bullshit rehetra avy amin'ny Canonical.
Ry namako, vakio tsara, izay lazain'i Clem fa fifanoherana….
Ny fanovana izay ampidirin'i Mint dia eo amin'ny haavon'ny sosona ivelany.
Mir io amin'ny sosona ivelany dia misy fiantraikany amin'ny tontolo sary fotsiny an'ny mpampiasa.
Ny Mint sy ny Elementary dia samy manana ny fanovana azy manokana momba ny tontolon'ny sary.
Raha tsy tianao i Mir dia avoahy dia mandehana.
Fantatsika rehetra ny nanjo an'i Nautilus, izay ivoahako an'i Nemo.
Tsia, ralehilahy, diso ianao. Mir dia mpizara sary, toa an'i Xorg sy Wayland. Raha esorinao io dia ho lany sary.
Xorg na Wayland dia hitohy hisy,
ary afaka manolo an'i Mir mora foana izy ireo.
Izany no antony ilazako aminao. Raha tsy tianao i Mir dia avoahy ary dia izay.
Ubuntu no miova avy amin'ny X.org 1.13.x mankany Mir.
Juan Carlos, rehefa manao installer Debian na ny derivatives avy aminy ianao dia tsy mametraka xorg mihitsy, fa ho avy io rehefa hametraka DE ianao.
Ny ifotoran'ny derivatives an'i Debian dia ny rafitra, fa tsy ny tontolo sary misy azy ireo, na ny fomba tsy fantatrao an'izany, heveriko fa tsy fetezana nanananao izany.
@DanielC Mijanona amin'ny famakiana sy famaliana mandritra ny fotoana iasako….
Eto dia tsy raha mpizara izy na tsia, ho hitanao ny zava-drehetra, momba ny fihetsiky ny mpanamboatra, satria raha ny tokony ho izy, raha rahampitso nvidia sy amd mijanona tsy manohana ireo bolany hafa ankoatry ny mir, ny disto rehetra dia hiafara amin'ny mirindra, fa tsy maintsy jerentsika!
Aza mitsentsitra azy intsony, "st0rmt4il": ny zavatra nataon'i Clement Lefevre dia ny mitsambikina kely amin'ny fotoana mety hanipazana diky eo am-pototry ny forkony ary hanao dokambarotra an-dàlana.
Ny nataon'i Linux Mint dia ny maka ny fototr'i Ubuntu na Debian. Eo amin'ny fotony no misy ireo tahiry fonosana.
Ny fanovana izay ampidirin'i Mint dia eo amin'ny haavon'ny sosona ivelany. Izany hoe, manova ny tontolon'ny birao izany na GNOME na KDE na XFCE ho an'ny Elementary OS ihany koa.
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia esorinao ny tontolon'ny UNITY ary apetraho CINNAMON na MATE, sns ……. Fa ny repositories sy ny configurations base dia mitovy amin'ny Ubuntu na Debian.
Linux Mint dia tsy manana fitoerany fonosana manokana izay novaina isaky ny kinova vaovao ……. Ny rindrambaiko sy ny programa sasany fotsiny no fonosiny.
Miresaka momba ny Mint.
Efa noraisiko ny tanan'ilay NEMO 1.7.0 Olivia vaovao izay ho tonga ao amin'ny Linux Mint 15 ……… azonao atao ny manafoana ireo sary masina TOOLBAR…. Araka ny hita eo amin'ny pikantsary .. ary koa ny MENUBAR dia azo afenina ……. Mba hanokafana rakitra iray HAMPIHORANA amin'ny NEMO 1.7.0 dia mila CLIX fotsiny ny bokotra havanana amin'ny FILE ary sokafy amin'ny TERMINAL ary dia izay.
Ny zavatra ratsy momba ny fizarana no vokatry ny hevitra maro, nefa tsy namaritra aho, indray mandeha monja no nametraka an'i Mint, tsy tiako izany, saingy heveriko fa izany no kely indrindra amin'izany, ankehitriny, hoy ny distrowacht, napetraka aloha io fa tsy mandresy lahatra anao, manao ny lesoka mitovy amin'ny Canonical ianao. mahafaly
Mampiasa distro sy tontolo iainana isan-karazany aho, ary ny Mint miaraka amin'i Cinammon dia tena tsara tokoa. Hevitra tsara ampiharina tsara. Manoro hevitra anao aho ny hampiasanao azy mandritra ny fotoana fohy mba hahalalanao tsara ny rafitra. Ny fametrahana, mijery ivelany ary manala izany satria ny "tsy tianao" dia tsy natao ho an'ny fanombanana marina. Soso-kevitra: isaky ny mametraka distro na tontolo iainana vaovao ianao dia tsy maintsy jerenao fa tsy maintsy nandalo doka fampifanarahana aloha ianao fa tsy mody hoe kopian'ny karbonan'ny tontolo iainana na distro izay nananan'izy ireo taloha, satria mety hahasosotra be izany avy eo. Izany no mitranga amin'ireo mpampiasa izay avy amin'ny Microsoft OS ary izay mikasa ny hanao zavatra amin'ny Linux dia mitovy tanteraka amin'ny nataony tany Windows.
Aza terena izy hampiasa azy mandra-pahazarany. Raha tianao ny fitiavana amin'ny fahitana voalohany, dia manana ny zony eto amin'izao tontolo izao hiteny ianao hoe "Tsy tiako io" ary mitady hafa. Ao amin'ny GNU / Linux dia tsy mila an'izany fampifanarahana amin'ny tontolo iainana izany (tsy ilaina izany). Afaka mampiasa tontolo iainana mifanaraka amintsika isika.
Ary iza no niresaka ny amin'ny fanerena? Vao "nanoro hevitra" ny fomba fiasa aho mba tsy ho sosotra. Avy amin'ny zavatra niainako manokana.
Raha ny momba ny adaptation dia heveriko fa tsy nahatakatra ahy ianao. Ny tiako holazaina dia ny fikasana hanandrana hiasa ao amin'ny OpenBox na XFCE amin'ny fomba nitovizantsika, ohatra, tamin'ny KDE na GNOME. Izy ireo dia tontolo iainana samihafa izay samy manana ny fampiasany sy ny endriny. Thunar dia tsy mitovy amin'ny Dolphin, ary ny mody manao hoe Thunar dia miasa toa ny Dolphin dia mahasosotra fotsiny satria hafa izy ireo. Mba hisorohana an'izany, ny mpampiasa dia mila manana saina sy mampifanaraka ny fahazarany amin'ny fomba fiasan'ny Thunar (na hafa). Farafaharatsiny amiko, ity fomba fahitana zavatra ity dia tena nilaina ary nahavita namono ny fahasosorana. Azoko atao ny mampiasa tontolo iainana sy rafitra ary mifanaraka aminy tsy misy olana.
Aza manahy, heveriko fa azoko tamin'ny voalohany ny fikasanao (ary fantatro fa tsara izany).
Hitako fa mahatsikaiky ny mamaly toy izany satria naka sary an-tsaina devoly mahantra aho nanandrana nanamboatra tontolo iray tsy natao ho azy tamin'ny fanarahana ny torohevitrao. Te ho mpisolovava ny devoly mahantra aho.
Raha ny marina dia tena ratsy tarehy amiko ny kanelina ... tsara kokoa ny tontolo iainana ambaratonga voalohany, ny olana dia tsy vitan'izy ireo mihitsy!
Manaiky aho, tsy tiako ny kanelina mihitsy
@ pandev92 Heveriko fa mitovy aminao ny momba ny kanelina sy fanabeazana fototra xD
ary azonao lazaina amiko ve fa ny mint dia tsy mitovy amin'ny ubuntu? xq ny fananana firaisana na kanelina dia tsy misy na inona na inona izay manamarika halavirana lavitra
Lojika fa raha te hanohy hampiasa x.org ianao dia afaka manova fanovana bebe kokoa ary dia izay, ny marina dia ubuntu isaky ny mametaka ny zava-drehetra bebe kokoa, ka sarotra kokoa ho an'ny tetikasa hafa ny fizotrany, heveriko mihitsy fa mety satria mandeha ny mint an'ny prime amin'ny distrowatch xD.
Heveriko fa na ho ela na ho haingana dia hanafoana ny Ubuntu ho toy ny fizarana izay iandohany. Heveriko fa ny kanelina sy i Mate dia samy hafa amin'ny birao hafa indrindra i Mate izay manidina. Ho ahy dia mieritreritra aho fa amin'izao fotoana izao dia mandeha tsara ny zavatra ao Mint.
Ubuntu no devoly….
Ary tsy sooo toa izany koa .. hahaha
Ha ha, ha …… .Nooooo, heveriko fa tsy ny devoly izany.
Victor miranda dia hoy izy:
Manome laza be loatra izany, amin'ny ankapobeny tena demonia lehibe io, fa ny Devoly kosa dia Windows…. Hahaha!
Fuck it, Ubuntu dia iray amin'ireo distro lehibe amin'izao fotoana izao, saingy mbola naterak'i Debian io, mbola manohy mamirifiry ireo trano fitahirizana Debian Testing alohan'ny hamoahana kinova miorina, ny hany ananany dia ny fitaovan'izy ireo sary sy ny latabatra (toa ny Mint), raha hanatsotra izany faran'izay mahery izany isika, dia samy tsy voavonjy daholo na Ubuntu. Samy manana ny tombony sy ny lafy tsarany ny distro roa, fa ny maka credit avy amin'ny Mint satria mampiasa tahiry Ubuntu, mampifangaro azy ireo amin'ny azy izay lehibe ihany koa, dia ny hanatsorana zavatra, toy ny milaza fa Naruto no nandika an'i Goku satria manana volo mavo izy ... .
Valiny tamin'i Victor Miranda
Ny olana amin'ny fianteherana amin'ny Ubuntu dia ny fiatrehana ny "Papa Mark."
Miala tsiny aho ho an'ireo rehetra nihevitra fa hevitra tsara io, safidy ratsy ...
Elaela aho nandao ireo "mpisolo toerana", aleoko nametraka ny mpamily ary afaka nankafy karazana tetikasa hafa aho.
Linux dia tena lasa lavitra tokoa tao anatin'ny taona vitsivitsy. Ary manomboka mankaleo anao amin'ny "ady anaty" tsy tapaka. Ho an'ny sasany dia mamokatra izany ... fa raha ny tenako manokana dia tsy manampy izany. Tsy noho ny haren'ny karazana, fa satria ny tobin'ny mpampiasa izay afaka mametraka ny Linux amin'izay sahaza azy dia tototry ny fifanakalozan-kevitra "lava kokoa" ireo. Ary avy eo dia misy ireto "mpandova soavaly" distro ireto izay ny olana lehibe amin'ny tetikasa fampandrosoana fanaparitahana mifanohitra amin'ny varimbazaha. Ny fahavoazana / tombontsoa mitovy amin'ny noforonin'i Canonical: tsy mitombina kokoa ny mitady fanampiana izay mahasoa ny rehetra amin'ny fikatsahana ny tanjona tratra. Mahatonga ahy hanakorontana ny zava-drehetra izany ary mividy MacBook. Satria mandritra ny taona vitsivitsy dia tsy manana ahiahy momba ny "kodiarana hanaraka" aho. Manomboka mihantitra ny olona iray, tsy manana fotoana firy ... ary mila zavatra misy solvent aho ary manana ho avy fa tsy zavatra iray anio ary iray hafa rahampitso. Heveriko fa rehefa afaka taona maro dia manomboka tsy ho ahy ny Linux. Ny mampalahelo ahy dia ratsy kokoa ny safidy solony.
Tsy misy lehilahy koa. Nisy zavatra nitovizany tamiko taona vitsivitsy lasa izay, taorian'ny taona maro niarahana tamin'ny Ubuntu ary be dia be ny nifandimby tamin'ny fizarana be dia be tamin'ny farany dia voatery nijanona aho satria adala ary mieritreritra aho fa izany no zavatra tsara indrindra nitranga tamiko teto amin'ity tontolo ity. Ankehitriny, ho ahy, tsy isalasalana fa Manjaro sy ho an'ny zanako Linux Mint 13 miaraka amin'i Mate fa raha ny filazan'izy ireo dia mandeha toy ny tselatra ny dadany fa tsy toy ny varavaran-tsekoly. Tsy misy amin'izy ireo manome ahy olana ary afaka manao izay rehetra ilaiko aho, ny sisa?, Mitondra azy ireo aty amiko.
Raha ny marina dia ny Rolling Release miaraka amin'ny LTS no dikan-teny tsara indrindra any, ilay voalohany apetrakao indray mandeha ihany ary raha mbola mitohy ny fivoaran'ny distro dia tsy hamerina intsony ianao, ny olana dia misy ny olana amin'ny fitoniana indraindray, eo no Ny LTS Shine, miaraka amin'ny fanavaozana voalohany fa mandefa ny hatokao izy ireo dia tsy mankarary intsony 😀
Andriamatoa Lefebvre mint dia tsy misy raha tsy ubuntu ka nijery aho fa misy ifandraisany betsaka amin'ny mint ary vao mainka aza taorian'ny nandefasana mint 14 ratsy ratsy, antenaina hihatsara ireo 15 satria raha tsy izany ireo izay midera anao izao dia hiverina haingana be
Na dia avy any amin'ny helo aza aho, manan-jo hanana hevitra aho, dia toy izany hatrany no mitranga amin'ireo derivatives of derivatives (Mint), izay ahantona amin'ny distro, ary rehefa mahazo ny tongotr'izy ireo amin'ity tranga ity Canonical, dia demarcated "by Foul", heveriko fa Ny mpitantana MInt dia tokony hanome toky an'ireo mpampiasa azy fa tsy hanao toa ilay lehilahy Ubuntu. mahafaly
Ny hevitro amin'ity lafiny ity, ary tsy amin'ny resaka Mint ihany, fa toy ny distro azo avy amin'ny Ubuntu-Debian dia afaka mandray ny lalana tadiavinao rahampitso ary hitondra ny motera sary tianao indrindra, raha tsy amin'ny olana fototra. izay tsy iza fa ny làlana nalehan'ny Ubuntu (fa Canonical sy M. Shuttleworth), heveriko fa ny ankamaroan'ny mpampiasa dia tsy mandray an-tanana fanontaniana iray inoako fa mifandraika amin'ity raharaha iray manontolo ity: Canonical dia, mieritreritra ary miasa toy ny ORINASA.
Ary ny orinasa dia tsy maintsy mamokatra vokatra, tombony, raha fintinina, mahazo vola.
Ao anatin'ny tontolon'ny Linux amin'izao fotoana izao, ary manala ireo lehibe izay manana tanjona faratampony amin'ny asa aman-draharaha mihoatra ny fampiasana an-trano (RHEL, Novell, SuSe, sns ...) ny orinasa tokana misy dia ny Canonical, ary ny fihetsiny tao anatin'ny 2-3 taona lasa Izy ireo dia miorina (araky ny hevitro) mba ho lasa benchmark amin'ny tontolon'ny Linux an-toerana, amin'ny distro miaraka amin'ny% avo indrindra amin'ny tsena, miaraka amin'ny fidirana avo indrindra amin'ny karazana fitaovana rehetra (Ubuntu for Phones, Ubuntu TV, sns ...), amin'ny configuring "marika" iray misaraka sy manavaka ny sisa amin'ireo disto, miaraka amin'ireo mpampiasa marobe ary miditra amin'ny tontolon'ny SL.
Ny fanontaniana farany apetrako amin'ny tenako dia ny inona? Satria ireo tanjona rehetra ireo dia mifanaraka amin'ny voalohany: ny manararaotra, manome tombony. Mety hivadika ho Canonable ho orinasa azo iainana irery, na mety hivarotra rahampitso orinasa iray manana tobin'ny mpanjifa lehibe, mpampiasa avo% ao anatin'ny tontolon'ny Linux (ary fitaovana maro: telefaona, takelaka, fahitalavitra , sns ...) ho an'ny orinasa matanjaka iray matanjaka kokoa liana amin'ny fitomboana ao amin'io sehatra io (Novell, Oracle, Microsoft na ...).
Na izany na tsy izany, raha izany rehetra izany dia miteraka farany amin'ny mpampiasa farany, amintsika, tongasoa, sa tsy izany?
Valiny tamin'i Ramon Luis
Eny, hiharatsy izany amin'ny MIR. Tsy misy afa-tsy distros tsy azo avy amin'ny Ubuntu.
Manantena aho fa hiafara amin'ny fisintahana rohy avy amin'ny Ubuntu indray mandeha i Mint, tato ho ato dia toa nanao zavatra tsara kokoa izy ireo ary faly ny mpampiasa azy ireo.
Nanandrana ny mint 13 aho, ary hita fa ny intel hd4000 dia tsy nahafantatra ahy, raha tsy mitovy ilay kinovan'ny ubuntu dia tsy nitranga izany olana izany, tsy fantatro raha kanelina na firaisan-tsaina ratsy kokoa.
Mazava fa ny tsirairay amintsika dia manana ny zavatra niainantsika, izay tsara ho an'ny sasany, ny hafa hahita azy tsara kokoa noho ny basim-borona tsara nefa mieritreritra aho fa misy ny zavatra tsara momba ny fahasamihafan'ny linux izay amin'ny farany raha misavoritaka ianao dia ho hitanao izany fizarana izay mifanaraka tsara amin'izay anananao.
Nampiasa Ubuntu aho ary nanjary lafaoro ny lapako, nampiasa Mint niaraka tamin'ny KDE tsara kokoa ny zava-drehetra, na dia tao amin'ny chrome Ubuntu aza dia diso be aho, ao amin'ny Mint dia miasa tanteraka.
Tahaka ny lazain'i Matthews, antenaiko fa lasa mahaleo tena kely ny mint amin'ny ubuntu, satria raha ny fijeriko azy dia mitovy ny mint sy ny ubuntu, miaraka amin'ny kanto samihafa ihany .. tsara raha mifantoka bebe kokoa amin'ny kinova LMDE izy ireo.
Hamela ny hevitro momba izany rahampitso aho amin'ny lahatsoratra iray .. 😛
Tena ho liana amin'ny famakiana azy aho.
Raha vantany vao milalao i Ubuntu dia handihy i Mint. mahafaly
Tsy mieritreritra an'izany aho
Nandiso fanantenana ahy be ny Mint. Ary mbola mitohy izany. Tsy nampifanitsy tsara ny loharanon-karenany izy ary nanomboka tetikasa tsy misy ho avy amin'ny faravodilanitra mivezivezy. Natoky ny LMDE aho fa heveriko fa ny hany fahaizany manamboatra ho avy raha ny lalana nalain'i Ubuntu no jerena. Azo antoka, ny zavatra mora dia ny manararaotra ny "patch" an'i Canonical ary manampy ny anao. Tokony handray ny omby amin'ny tandrony izy ary hiala ankehitriny. Tokony ho fizarana mifantoka amin'ny tontolo iainana (na inona izany na inona) fa ny fanomezana, araka izay azo natao hatrizay, ny fahafahan'ny mpampiasa ... mampiasa izay tiany, tsy misy olana, tsy toa an'i Ubuntu, izay misy ny patch sy ny fomba ampidirina zavatra toa ny Unity ao amin'ny rafitra, manomboka olana ho an'ity karazana fahalalahana ity izy ireo. Ary ambonin'izany rehetra izany, tokony hatsahatra ny ezaka adalana: ho an'ny Mate sa Kanelina ?. Ho an'ny Mate sy zavatra mitovy aminy ary ho an'ny zavatra toa an'i Kanelina, ampy ny fanitarana, toy ilay natolotr'izy ireo tany am-boalohany na tahaka ilay efa misy ho an'ny Gnome Shell 3.8. Tokony hampiasa fototra madio (Debian aleony) ary "kopia" ny tsara indrindra amin'ny trano tsirairay, fa tsy handova ny lesoka ary hanandrana manitsy azy ireo amin'ny famafana vaovao.
Fanamarihana: raha azo ovaina ny hevitro dia hahitsiny ireo lesoka tamin'ny tsipelina…. fa….
Mazava aho fa ny safidy tsara indrindra dia ny miala tanteraka amin'ny UBUNTU ary manome ny laharam-pahamehana tanteraka ny LMDE, manantena aho ary hino fa na ho ela na ho haingana dia hisy izany.
Mbola mahatsikaiky aho fa "manidina" ity na ity. Tsy nahita distro ratsy tamin'io lafiny io aho ... ary tsy manana solosaina matanjaka aho (natambatra ny sary misy ahy ankehitriny). Ny fotoan-tsarotra dia tonga hatrany amin'ny fametrahana vaovao (kinova) mandra-pahatongan'ny tatitra sy ny famahana ny olana. Ary niaraka tamin'ny ekipako nanetry tena dia namindra ny zava-drehetra aho, KDE, Gnome Shell, Unity ... .. Mbola misy ekipa na mpizara manetry tena kokoa izay tsy mila fitaovana be loatra .... Eny, efa be loatra ny safidy. Ny tsy azo atao dia ny ampitso ny tontolo iainana midadasika dia miadana (lanja) noho ny safidy vaovao mitady hanome fahafaham-po ny mpampiasa sasany, ka mizara roa ny tobin'ny mpampiasa (manakana ny ala tsy hahitana ny ala). Fantatr'i Ubuntu izany ary na dia tsy tiako ny lalan'i Unity aza, anjaran'izy ireo ary mandra-pahafatiny (mampalahelo fa ny familiana an'io sambo io dia nivarotra be loatra tato ho ato). Noho izany, ny fanaovana tsinontsinona ny Unity (satria tsy safidy ho an'ny vondrom-piarahamonina sisa), manana safidy roa mitambatra (lehibe amin'ny lafiny fitakiana loharanom-bola) izahay: KDE sy Gnome (Shell) ary ny hafa manana tantara efa ela. azo sotroina ihany koa, miaraka amin'ny fanampian'izy ireo mampifanaraka amin'ny loharanom-pahalalana vitsy kokoa ary manaraka ny tsipika famolavolana nentim-paharazana kokoa: LXDE sy XCFE. Tsy ampy ve izany? Fa maninona no zarazaraina hatrany ny base mpampiasa? Na eo aza ny lazain'ny maro, tsy mieritreritra mpampiasa izy ireo fa ho tanjona faratampony dia manohy ny fanavahana izy ireo nefa mandany ny fitsipiky ny rindrambaiko malalaka…. na farafaharatsiny izay tiako momba an'ity tontolo ity. Talohan'izay dia nazava kokoa ny raharaha; Nahita an'izao tontolo izao avy amin'ny Ubuntu aho, hitako ny fivoaran'ny raharaha, tsy nisy be pitsiny. Izao dia lasa voafandrika daholo ny zava-drehetra, zavatra iray ihany ny anio ary ny iray hafa rahampitso, misy ny tetikasa miarina ary ilaozana, ny hafa kosa tokony handroso…. Maimaimpoana ny vondrom-piarahamonim-pampandrosoana fa tsy dia mifanohitra amin'ny biby goavambe toa an'i Microsoft na Apple. Maninona raha mametraka ny fototry ny tsipika asa (na roa) ao amin'ireo faritra tsirairay amin'ny fampandrosoana ny rafitra?. Io dia mandritra ny fotoana fohy mandra-pahatongan'ny ampahany dia resaka tsy fanaraha-maso fotsiny, ny làlan'ny fampandrosoana manokana ... .. Tsy tiako ny zavatra hitako. Ary tsy miresaka ny tontolon'ny birao fotsiny aho. Fantatro fa misy zavatra toy ny motera handaminana ny faritra misy ny sary na ny fifanakalozan-kevitra momba ny GTK na QT… .. Amin'ny farany, dia tonga ny fivarotana distrika izay hodgepodge misy patsa na aiza na aiza…. raha tsy misy ny fahamendrehana toa ny an'ny MacOS.
Tsy manana ekipa tsara koa aho, ary koa sary mihetsika, saingy azoko antoka fa ny mint miaraka amin'ny lalitra vady, manjaro misy lalitra xfce, ary lalitra pclinuxos koa. Fa ho ekipako izy, mavesatra be ny Ubuntu miaraka amin'ny Unity
Karloz507 dia hoy izy:
Ho ela velona i reny Devian
Valiny tamin'i Karloz507
FreeNAS amin'ny Linux Handbook
Youtube for iOS dia mandefa ny loharano "Alefaso amin'ny fahitalavitra"